यी ५ लक्षण देखिए हैजाको शंका! १० संक्रमित मध्ये १ जनामा हैजाले जटिल अवस्था निम्त्याउँछ। समयमा उपचार गरिएन भने मृत्युदर पचास प्रतिशतसम्म पुग्न सक्दछ। तसर्थ हैजाको छिटो पहिचान र सहि उपचार नै जटिलताबाट बच्ने मुख्य उपाय हो। शुक्रबार, असार ३, २०७९
सिफिलिस कस्तो रोग हो? कसरी सर्छ? बीएमजे जर्नलको तथ्याङ्क हेर्दा यो रोग एकपटक सम्पर्क गर्दा सर्ने सम्भावना १० देखि ३० प्रतिशतसम्म हुन्छ र यसको व्यापकता सन् 2000 देखि तीन सय प्रतिशतले बढेको छ। मंगलबार, जेठ २४, २०७९
बच्चामा ज्वरो: अस्पताल भर्ना हुने एक प्रमुख कारण ज्वरो बच्चाहरुमा सबैभन्दा लगातार देखिने लक्षणहरुमध्ये एक हो र आमाबाबुको चिन्ताको लागि एक सामान्य विषय हो। बिहीबार, जेठ १९, २०७९
के हो कुष्ठरोग, कस्ता हुन्छन् यसका लक्षणहरू? यो रोगले छालामा असर गर्दा शरीरमा नचिलाउने, छुँदा थाहा नहुने दाग देखिने, छाला बाक्लो हुने, गिर्खाहरू देखा पर्नुका साथै स्नायुमा असर गर्दा हातगोडामा छुँदा थाहा नपाउने हुन्छ र विस्तारै यस रोगले मांसपेशी कमजोर बनाइदिन्छ। बुधबार, जेठ १८, २०७९
सुर्ती कि स्वास्थ्य? सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग विभिन्न कुराहरुले निर्धारित गर्दछन। जस्तै:नेपालमा सन् २०१६ मा गरिएको स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार धूम्रपानको शिक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। मंगलबार, जेठ १७, २०७९
खोप लगाउन धेरै पटक भनें, मान्नु भएन र अन्तमा रेबिज देखियो! बिज खोप लगाउनलाई कुकुरको बर्ष वा उचाईमा (विशेषत एन्टी रेबिज खोप नलगाएका) भर पर्नु हुँदैन। पछिल्लो समय यस्तो प्रकारका घटनामा बृदि भएको देखिन्छ। आइतबार, जेठ १५, २०७९
'मंकीपक्स' भाइरस फैलँदो! नेपालसम्म आइपुग्ला? संक्रमण भएको ५ देखि २१ दिनसम्ममा 'मंकीपक्स'को लक्षणहरु देखिने गर्दछ। शुरुको अवस्थामा भने लक्षणहरु अरु संक्रामक रोगहरुसँग मिल्दोजुल्दो देखिने गर्दछ। ज्वरो आउनु, टाउको र जिउ दुख्नु, जाडो लाग्नु, लिम्फ ग्रन्थिहरु सुन्निनु यसका प्रारम्भिक लक्षणहरु हुन्। शुक्रबार, जेठ ६, २०७९
सबै ग्याष्ट्राइटिस अल्सर र सबै अल्सर क्यान्सर हुँदैनन् पेट ढाडिने, पेट फुल्ने, धेरै ढ्याउ आउने जस्ता लक्षणहरु सामान्य हुन्। कसैलाई अल्सरका लक्षणहरु पनि देखिन सक्छन्। पेट पोल्ने, पेट दुख्ने लक्षणहरु पनि हुन सक्छन्। शुक्रबार, जेठ ६, २०७९
युवाहरूमा बढ्दो उच्च रक्तचाप: कारण र रोकथामका उपाय अमेरिकी मेडिकल एसोसिएसनका अनुसार, सामान्य व्यक्तिको रक्तचाप १२०/८० भन्दा कम हुनुपर्छ भने १३०/८० वा सो भन्दा बढी रक्तचापलाई उच्च रक्तचापको रुपमा परिभाषित गरिएको छ। मंगलबार, जेठ ३, २०७९
बच्चालाई हुने कब्जियतका कारण, लक्षण र बच्ने उपायहरु बच्चालाई सबैभन्दा बढी विधालय पठाउने उमेर हुनुअघि देखिने गर्दछ। लगभग ९५ प्रतिशत बच्चाहरुमा कुनै ठोस कारण नभेट्टिने र असाध्यै सामान्य रुपमा देखिने भएता पनी ५ प्रतिशत कारण पत्ता लगाउनुपर्ने महत्वपूर्ण देखिन्छ। सोमबार, जेठ २, २०७९
बाँझोपन के हो, बच्चा किन बस्दैन? बाँझोपनले ज्यानलाई सिधै खतरा नभएकाले यसलाई स्वास्थ्य समस्याको रूपमा लिएको पाइदैन तर यसले निम्त्याउने परिणामहरूलाई भने नजरअन्दाज गर्न नसकिने अवस्था छ। मंगलबार, वैशाख २७, २०७९
रुघाखोकी गराउने भाइरसले बालबालिकामा कडा 'हेपाटाइटिस' गराउँदै? बालबालिकामा देखिएको कडा रहस्यमय 'हेपाटाइटिस'को कारक पत्ता लगाउन वैज्ञानिकहरुले विभिन्न कोणहरुबाट परीक्षण तथा अनुसन्धानहरुलाई निरन्तरता दिइरहेका/अगाडि बढाई रहेका छन्। बुधबार, वैशाख २१, २०७९
मानसिक रुपमा फ्रेस हुने १० उपाय मनका कुरा अरूलाई भन्ने बानी गर्ने। हामीमा ठुलो समस्या आउँदा पपनि अरूलाई नभन्ने बानी हुन्छ जसले गर्दा मनमा अशान्ति फैलन्छ। हावा भरिएको प्रेसर कुकर झैँ बिस्फोट हुने वा अचानक सिठ्ठी लागेर ठूलो हलचल हुनेजस्तो हामीभित्र पनि हलचल हुन सक्छ। मंगलबार, वैशाख २०, २०७९
रातो फोका आउने अर्टिकारिया 'डाबर एलर्जी' के हो? यो आफैंमा रोग होइन। यो कुनै रोगको लक्षण हुन सक्छ। त्यसैले छाला रोग विशेषज्ञको सल्लाह, सुझाव र उपचार लिनुपर्छ। राम्रो सँग क्लिनिकल हिस्टोरी लिनुपर्छ। आइतबार, वैशाख १८, २०७९
२४ घण्टामा मृत्यु गराउन सक्ने 'चन्दिपुरा भाइरस' के हो? यो भाइरस फैलाउने भेक्टर काला ज्वरो फैलाउने पोथी 'फ्लेबोटोमिन स्याण्डीफ्लाई' नामक भुसुना भएको र यसको उपस्थिति नेपालमा पनि व्यापक/बाक्लो रहेकोले यसको जोखिम नेपालमा पनि उच्च देखिन्छ। बुधबार, चैत ३०, २०७८